General – AELC
We promise success.
နေ့စဉ်သုံး အီဒီယမ်များ အပိုင်း (၁)
Posted on November 28, 2021 | Posted on imirror | LeaveaComment on နေ့စဉ်သုံး အီဒီယမ်များ အပိုင်း (၁)
to get on : ကား၊ ရထား စသည့် ယဉ်များပေါ်သို့ တက်သည်။ I always get on the bus at 34th street.ကျွန်တော် ၃၄ လမ်းကပဲ အမြဲတမ်း ကားစီးတယ်။ William always gets on the subway at the same station every morning.ဝီလီယံက မနက်ခင်းမှာ ဘူတာတစ်ခုတည်းကပဲ အမြဲတမ်း မြေအောက်ရထားစီးတယ်။ to get off : ကား၊ ရထား စသည့် ယဉ်များမှ ဆင်းသည်။ Helen got off the train at the 42nd […]
စကားတစ်လုံး အသုံးများစွာ (Fast)
Posted on November 27, 2021 | Posted on imirror | LeaveaComment on စကားတစ်လုံး အသုံးများစွာ (Fast)
ဘာသာစကား လေ့လာတဲ့အခါ စကားလုံးတွေဟာ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ အဓိပ္ပာယ်တူပေမယ့် အသုံးအနှုန်းမတူတာတွေ၊ စကားလုံးတူပေမယ့် အဓိပ္ပယ်မတူတာတွေ စသည့်အချက်တွေကို ဘာသာစကား လေ့လာသူတိုင်း မလွဲမသွေ တွေ့ကြုံကြရမှာပါ။ ဥပမာ – “တိုက်သည်” ဆိုသည့် မြန်မာ စကားလုံး တစ်လုံး သည် ဝါကျအပေါ်တွင် မူတည်က အဓိပ္ပာယ် ပြောင်းလည်းသွားသည်ကို တွေ့နိုင် ပါတယ်။ ရေ တိုက် သည်။ အဖြေ တိုက် သည်။ ခလုပ် တိုက် သည်။ ကော်ပတ် တိုက် သည်။ဖော်ပြပါ ဝါကျများကို ကြည့်လျှင် စကားလုံး တူသော်လည်း အဓိပ္ပာယ်မတူသည်ကို တွေ့နိုင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကား လေ့လာရာတွင်လည်း အလားတူ အဖြစ်များ များ စွာရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်မှာ “fast” ဆိုတဲ့ စကားလုံးရဲ့ […]
Stay နဲ့ Live ဘယ်လိုကွာခြားလဲ ?
Posted on November 15, 2021 | Posted on imirror | LeaveaComment on Stay နဲ့ Live ဘယ်လိုကွာခြားလဲ ?
သင်တန်းသူ တစ်ယောက်က မေးလာပါတယ်၊ “stay နဲ့ live ဘာကွာပါသလဲ” ဆိုတဲ့ မေးခွန်းနဲ့ အစချီပြီး “ခုသူတို့က အဆောင်မှာ နေတာပါ၊ အဲဒါကို We live inahostel. လို့သုံးရမလား We stay inahostel. လို့သုံးရမလား သူငယ်ချင်းတွေကြားထဲမှာ အငြင်းပွားနေလိုပါ” လို့ facebook message က မေးလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပိုပြီး ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဖြစ်သွားအောင် stay နဲ့ live က နေသည် လို့ မြန်မာလို အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူပေမဲ့ မတူညီတဲ့ အသုံးအနှုန်းပုံစံတွေကို ရေးသားလိုက်ပါတယ်။ Stay (v) – နေသည် – Stay until […]
Verb အကြောင်း နည်းနည်း ပြောမယ်
Posted on November 15, 2021 | Posted on imirror | LeaveaComment on Verb အကြောင်း နည်းနည်း ပြောမယ်
မနေ့က သင်တန်းသူ တစ်ယောက်က မေးလာပါတယ် join နောက်က ဘာလို့ to မလိုက်ရတာလဲတဲ့ … အဲဒါကြောင့် verb အကြောင်းကို နည်းနည်းလောက် ရေးချင်ပါတယ်။Verb တွေကို အကြမ်းခွဲမယ်ဆိုရင် Transitive Verb နဲ့ Intransitive Verb ဆိုပြီး အဓိက အုပ်စု (၂) ခုတွေ့ ပါမယ်။ E to E dictionary မှာရှိရင် Head Word လို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ့်ကြည့်တဲ့ စကားလုံး ပြီးရင် ကွင်းစ ကွင်းပိတ်ထဲမှာ (T) (I) စသည်ဖြင့် တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Transitive verb တွေနောက်က object တိုက်ရိုက် လိုက်ပါတယ်။ preposition မလိုပါဘူး။ဥပမာ – eat […]
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာကြမယ်
Posted on November 15, 2021 | Posted on imirror | LeaveaComment on ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာကြမယ်
အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း လေ့လာချင်ပါသလား … ? ဒါပေမယ့် ဘယ်လို လုပ်ရမှန်းမသိဘူးလား … ဘယ်လိုရုပ်ရှင် ရွေးကြည့်ရမလဲ .. ကြည့်ရင်းနဲ့ ဘယ်လို လေ့လာရမလဲ .. သူတို့ပြောတာတွေ နားမလည်ဘူး ဆိုရင်တော့ ဒီစာစုမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကို ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း လေ့လာမယ့် ပုံစံတွေ၊ အချက်အလက်တွေ မျှဝေသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်း အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာသင့်လဲ ? ************************************************** 1. အင်္ဂလိပ်စာ/ အင်္ဂလိပ်စကား အစစ်ကို လေ့လာနိုင်တယ် အင်္ဂလိပ်ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တဲ့အခါ ကိုယ်အတန်းထဲမှာ ကြားဖူးတဲ့ Listening Lesson က အသံတွေနဲ့ ကွဲပြားနေတာကို သတိထားမိပါလိမ့်မယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စကားပြောတဲ့အခါ သူတို့က စကားလုံးတွေကို Linking လုပ်ပြီးပြောတာဖြစ်လို့ပါ။ တစ်ချို့နေရာတွေမှာ […]
Posted in General, Listening
အမှတ်(၁၀၂)၊ အောင်မေတ္တာ(၁)လမ်း (၁)ရပ်ကွက်၊ လှိုင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့။
Tele: +95925 25 85 085
Ⓒ AELC - 2021